जिरो आवरमा पद्मा अर्याललाई पाँच प्रश्न :: सन्जिब बगाले :: Setopati
नेकपा एमालेको दसौं महाधिवेशन शुक्रबारबाट चितवनको भरतपुरमा सुरू हुँदैछ। उपाध्यक्ष भीम रावलको उम्मेदवारी घोषणाले केपी शर्मा ओलीको सर्वसम्मत अध्यक्षतालाई चुनौती दिएको छ। अन्य पदाधिकारीमा पनि निर्वाचन हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ।
अन्तिम समयमा एमाले केन्द्रीय सदस्य पद्मा अर्याललाई हामीले पाँच प्रश्न सोधेका छौं।
कुन पदका लागि उम्मेदवारी दिने तयारी गर्नुभएको छ?
दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट सर्वसम्मतिका साथ नेतृत्व चयन गर्न नेताहरू संवाद गरिरहनुभएको छ। हामीले यसलाई एकताको महाधिवेशन भनेका छौं। यो महाधिवेशनबाट एकताको सन्देश दिन हामीले सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। सन्तुलन कायम गर्ने उपयुक्त विधि भनेको सर्वसम्मति हो। यसका लागि नेतृत्वले विवेकपूर्ण र न्यायोचित ढंगले जे निर्णय गर्छ, त्यसलाई नै शिरोधार्य गरेर जानु उपयुक्त हुन्छ। सर्वसम्मति भएन र प्रतिस्पर्धा गरेर जानुपर्ने अवस्था आयो भने पहिले जुन तरिकाले टुंगो लगाउँथ्यौं, त्यही विधि र प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ। त्यो बेला स्थिति हेरेर आफूलाई जहाँ उभ्याउनुपर्ने हो, म त्यहीँ उभिन्छु।
सर्वसम्मत भएन भने म यो तयारीमा छु भन्ने केही छैन?
त्यस्तो केही छैन।
सर्वसम्मत हुँदा त पदाधिकारीको केन्द्रीय सदस्यको संख्या बढाउने होला नि?
यो महाधिवेशनले आवश्यक परे विधान संशोधन गर्न सक्छ। तै पनि अस्ति भर्खर विधान संशोधन गरेकाले त्यसकै प्रावधानमा रहेर व्यवस्थापन गर्नु उचित हुन्छ। कुनै हालतमा व्यवस्थापन हुन सकेन भने संशोधन गर्नै सकिन्न भन्ने होइन।
पदाधिकारीमा महिला सहभागिता बढाउन यहाँहरूको भूमिका कस्तो रहन्छ?
त्यसको निम्ति कुनै गृहकार्य गरिराख्नपर्छ जस्तो लाग्दैन। किनभने हाम्रो नेतृत्व सचेत छ। विगतमा पनि महिलाहरूबारे सबभन्दा धेरै कुरा उठाएर पहलकदम लिने पार्टी हो। विधानमा विगतमा ३३ प्रतिशत थिएन, अहिले ३३ प्रतिशतको प्रावधान छ। पदाधिकारीको सवालमा आठौं महाधिवेशनमा एक जना र नवौंमा दुई महिला भएका थिए। यसपटक त्यो संख्या स्वाभाविक रूपले बढ्छ।
पदाधिकारीमा महिलाको संख्या बढ्दै गर्दा यहाँको दाबी रहन्छ कि रहँदैन?
पार्टीमा योग्य र सक्षम साथीहरू हुनुहुन्छ। आफूले जिम्मेवारी पाए निर्वाह गर्न तयार हुनुहुन्छ। त्यसैले पार्टीले आवश्यक ठानेमा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकिने भन्ने होइन। यसपालि धेरै अरू चिज हेरेर महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले मेरो अडान केही छैन। उचित जिम्मेवारी दिएर व्यवस्थापन गर्नेमा नेतृत्वले विवेक पुर्‍याउँछ भन्ने लाग्छ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर १०, २०७८, १०:४३:००